Fanadiovana an-tserasera - Mety hanana endrika maro ny fandevenana an-tserasera
Ny soritr'aretina sy ny anton'ny fanandevozana an-tserasera
Ahoana no ahafahanao mitsabo tena amin'ny Internet?
Miala sasatra ve ny zanako?
Azo atao ve ny mividy entana amin'ny Internet? Amin'ny ankapobeny, ny olombelona dia mety ho lasa miankin-doha amin'ny zava-drehetra iainany eo amin'ny fiainany andavanandro. Avy amin'ny fahitalavitra sy ny alikaola, sigara na sakafo. Mazava ho azy, hatramin'ny taona Internet ihany koa.
Ny fiankinan-doha dia miavaka hatrany fa tsy afaka miaina tsy misy ny voka-dratsiny ny mpidoroka, amin'ity tranga ity ny Internet. Ny fiankinan-doha amin'ny Internet dia afaka manana endrika maro ary tsy mitovy amin'ny ankizilahy sy ankizivavy. Ny iray amin'ireo mpisera aterineto fito androany dia voakasik'io fiankinan-doha io. Mandritra izany fotoana izany, ny fiankinan-doha amin'ny aterineto dia fantatra amin'ny fomba ofisialy ho aretina.
Fampitahana amin'ny Internet
Miankina amin'ny antony mahatonga ny fiankinan-doha amin'ny aterineto, ny fihetsiketsehana hafa dia eo ampelatanany. Na dia izany aza, ny zava-misy dia ny firaisana ara-nofo mihintsy no resin'ny onjam-peo an-tserasera.
Na tsy zava-dehibe eto ny lalao na ny lozam-pifamoivoizana, dia bebe kokoa amin'ny toetran'ny be loatra ny milalao ny ordinatera.
Ny vehivavy sy ny tovovavy dia mety ho any amin'ny forums amin'ny fotoana rehetra, fizarana sehatra sy fifanakalozan-dresaka tsy miankina. Ny ordinatera dia miasa mandritra ny famantaranandro, tsy misy miasa eny aminy.
Mazava ho azy, ny tsipika eo amin'ny fiankinan-doha sy ny fampiasana matetika no voalohany mikoriana, dia toy izany no afaka fiankinan-doha amin'ny aterineto ihany koa ny lavitra tsy ho nekena ho toy izany. Na izany aza, raha foana mipetraka ny tara amin'ny alina eo amin'ny solosaina, matory kely, izay nanomboka ny hitondra ny sakafo teo amin'ny ordinatera, izay tsy niraharaha namana sy manala bebe kokoa hiaina ao amin'ny tontolo virtoaly, fa tsy amin'ny zava-misy, dia mety aterineto doha na amin'ny ambony mety ho lasa toy izany.
Fahaiza-mamaky media - Fitaovana smartphones sy ordinatera
Ny olana ara-batana koa dia mitondra ny fiankinan-doha amin'ny Internet miaraka aminy. Ankoatra ny olana eo amin'ny maso dia mety hiverina amin'ny fanaintainana sy ny fihenjanana ihany koa ny vokatry ny maro. Ny fitsaboana ataon'ny vatana dia tsy miraharaha toy ny fiankinan-doha hafa. Izany dia mety ho lasa lavitra mihitsy aza.
Ny ankamaroan'ny ao ambadiky ny fiankinan-doha amin'ny aterineto dia aretina ara-tsaina hafa, satria ny fiankinan-doha amin'ny aterineto dia tsy aretina mahaleotena. Ny fiankinan-doha amin'ny aterineto matetika dia mifandray amin'ny soritr'aretina mipoitra, amin'ny aretim-poana sy ny aretina hafa amin'ny endriny, dia soritr'aretin'ny iray amin'ireto aretina ireto, toy izany koa.
Toa tsy azo antoka ny zava-misy, fa ny tontolo virtoaly ihany no manome fiarovana. Ny fahatsapan-tena ho an'ny mpidoroka an-tserasera, toy ny an'ny mpidoroka hafa, dia marefo matetika. Raha voakatona ny ordinatera, na tsy afaka mampiasa Internet, dia hita fa misy ny soritr'aretina toy ny fahasosorana, ny tsy fandriampahalemana ary ny fahaketrahana.
Tahaka ny fanandevozana hafa rehetra, ny fiantsoana ny fiankinan-doha dia tonga aloha.
Online fiankinan-doha amin'ny olon-dehibe
Moa ny fiankinan-doha amin'ny aterineto indray mandeha ekena sy niaiky, dia matetika manampy ny manontany manam-pahaizana mba hanadihady ny tena mahatonga ny fiankinan-doha, izany hoe, ny lainga iray amin'ireo voalaza etsy ambony aretin-tsaina eo anatrehan'i.
Raha raisina izany dia maka toerana mipetraka ihany koa ny fiankinan-doha amin'ny aterineto. Ny marary dia tokony hahatsapa fa tsy afaka mamaha ny olany ny Aterineto.
Amin'ny voalohany ihany koa, manampy amin'ny fampihenana ny dingana amin'ny aterineto mandritra ny dingam-pivoarana izy mba hanaovana ireo zavatra andavanandro: zaridaina, mandeha am-pilalaovana, misakafo, manangona namana.
Io fihetsika ara-dalàna io dia tokony hianarana ara-bakiteny. Ny vondrona fanampiana tena dia afaka manampy betsaka mandritra ity fotoana ity sy any aoriana.
Na ny fiantraikan'ny zanakao amin'ity fiankinan-doha ity dia azo ekena amin'ny soritr'aretina etsy ambony, farafaharatsiny azo alaina na misy loza. Mahaiza mandanjalanja ary manamarika ny fotoana lanin'ny zanakao amin'ny Internet. Izy irery no tena manan-danja.
Raha manana olana ianao dia mety hanampy anao ny fanendrena amin'ny mpitsabo iray. Ankoatr'izay, tokony tokony hifehy ny fanjifana ianao ary hahazoana antoka fa hanao fanatanjahan-tena ny zanakao ary maro ny ankizy mitovy aminy, mazava ho azy, raha tsy mampiasa Internet! Izay olona manana fiainana ara-tsosialy dia tsy dia mahafinaritra loatra!
Fahitalavitra ho an'ny ankizy | Media Internet
Nahoana no boky ny ankizy? | Boky media
Computer & Internet ho an'ny mpandray anjara
Karoka fitadiavana ankizy | Ankizy ao amin'ny Internet